������������������������������������ - नारी
कान्समा सुरक्षा शैली
नारी संवाददाता , असार ९, २०७९
फ्रान्सको कान्समा हालै आयोजित ‘कान्स फिल्म फेस्टिभल’ को ७५ औं संस्करणको ‘रेडकार्पेट’ मा पहिलो पटक नेपाली अभिनेतृ उत्रिन सफल भइन् । अभिनेतृ सुरक्षा पन्तले उक्त मौका पाएकी हुन् । उनी अभिनीत ‘द एट् माउन्टेन्स्’ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्रलाई ‘फेस्टिभलमा प्रिमियर’ गरिएको थियो । -- पुरै पढ्नुहोस् --
प्रदर्शनीमा सजावट सामग्री
काठमाडौंमा हालै घरायसी सजावटका सामग्रीहरूको प्रदर्शनी सम्पन्न भयो । बबरमहलस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा आयोजित प्रदर्शनीमा परालका गुन्द्री र मकैका खोस्टाका चकटीलगायतका सामग्री राखिएको थियो । -- पुरै पढ्नुहोस् --
आत्मविश्वास र क्षमता
प्रतिभा सुवेदी, असार ९, २०७९
नेपाल मात्रै होइन, विश्वभरि नै पुरुषप्रधान समाज छ । पितृसत्तात्मक संरचना भएको समाजमा पुरुषहरूकै रजगज चल्छ । पछिल्लो समय भने यो मानसिकतामा केही परिवर्तन भएको छ । केही नारीहरू महत्वपूर्ण पदमापुगेका छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
आमाको कोख छोरी र लैंगिक विभेद
यमुना अर्याल, असार ९, २०७९
कोही किन हिंसाको शिकार हुन्छ ? उसलाई डर, धाक, धम्की देखाइन्छ र इज्जतको ट्याग भिराएर सबै कुरा लुकाउन लगाइन्छ । खुलेआम अपराधी हिँड्ने, उसको इज्जत नजाने तर महिलाले मात्रै धानिरहनुपर्ने कस्तो इज्जत ? पछिल्लो समय महिलाहरू जागेको बेला हो, हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, एक पटक प्रतिवाद गरेपछि अर्को पटकबाट कसैले हिंसा गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
प्रयोगात्मक सिकाइले बालबालिकालाई व्यावहारिक बनाउँछ
नारी संवाददाता , असार ८, २०७९
विद्यालयमा बालबालिकाको सिकाइ कस्तो हुनुपर्छ ?बालबालिकाको सिकाइ समयानुसार परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । पछिल्लो समय डिग्री भन्दा व्यक्तित्व महत्वपूर्ण हुन थालिसक्यो । चौतर्फी ज्ञान र विकासका लागि व्यावहारिक सिकाइ आवश्यक छ । -- पुरै पढ्नुहोस् --
लक्ष्मी भण्डारी, असार ७, २०७९
सानै उमेरमा चर्चाको शिखर चुमेकी गायिका हुन्–मेलिना राई । दार्जीलिङमा जन्मिएकी उनको पारिवारिक वातावरण संगीतमय थियो । बुवा जीवेशकुमार राई संगीत प्रशिक्षक थिए । बुवाको प्रेरणाले संगीतमा लागेको बताउने मेलिनाले ११ वर्षको उमेरदेखि गीत गाउन थालेकी हुन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --
मेयर/अध्यक्षमा २५ महिला
नारी संवाददाता , असार ७, २०७९
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा ३४ हजार सात सय ४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । जसमा १४ हजार ४ सय ४५ महिलाको निर्वाचित भए । -- पुरै पढ्नुहोस् --
प्रकृति दाहाल, असार ७, २०७९
यो वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्लाही रामनगर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट २२ वर्षीय राजाबाबु यादव विजयी भएका छन् । -- पुरै पढ्नुहोस् --